Mapepanhau matsva akasarudzika eiyo iPhone 8 anoonekwa muIOS 11 GM | IPhone nhau
Nyowani yakasarudzika iPhone 8 mifananidzo inoonekwa muIOS 11 GM
iOS 11 GM yakazivisa zvakakosha kwatiri uye zvimwe zvacho zvataive tisingazive nezve iPhone 8. Kuburitswa kweiyi vhezheni yekupedzisira yeIOS 11 kwave kwakakosha kusimbisa mamwe mabasa pamberi pekuratidzwa kwechigadzirwa Chipiri chinotevera, asi zvinotisiyirawo mapikicha matsva emidziyo yedu.
Mavara emadziro ane matema mashure, anozove anoshamisa pamwe neAMOLED skrini yeiyo nyowani iPhone 8, uye kuti iwe unogona ikozvino kurodha kana iwe uchida kutarisa uye kuvaedza nemidziyo yako. Isu tinovaratidza pazasi kuwedzera kune ekurodha pasi maratidziro e iPhone ne iPad.
Sezvauri kuona, pane chimwe chinhu kune wese munhu, uye iwo matema mamiriro akasimuka kupfuura ese. Izvo zvisati zvawanikwa ndezvemitsva mitsva yehupenyu yekiyi skrini, chimwe chinhu chichaodza mwoyo vakawanda. Isu tinokusiira iwe mafaira akatsimbirirwa muZip nemamiriro e iPhone ne iPad mune izvi zvinongedzo kune yedu Teregiramu chiteshi uko kwavakaiswa:
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Nyowani yakasarudzika iPhone 8 mifananidzo inoonekwa muIOS 11 GM
GreenIQ smart gadheni chiteshi, chengetedza kudiridza ne iPhone yako
Nyowani Portrait modhi, Yechokwadi Toni kuratidza uye zvimwe zvakaratidzwa muIOS 11 GM